आफ्नो छोरीको प्रेमीसंग विवाहको कुरालाई लिएर रिसाए सुनील शेट्टी, सामाजिक संजामै यस्तो लेख्दै दिए चेतावनी – List Khabar
Home / समाचार / आफ्नो छोरीको प्रेमीसंग विवाहको कुरालाई लिएर रिसाए सुनील शेट्टी, सामाजिक संजामै यस्तो लेख्दै दिए चेतावनी
आफ्नो छोरीको प्रेमीसंग विवाहको कुरालाई लिएर रिसाए सुनील शेट्टी, सामाजिक संजामै यस्तो लेख्दै दिए चेतावनी
admin January 22, 2022 समाचार Leaveacomment 109 Views
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुनील शेट्टी यतिबेला मिडियाबाट अलि टाढा छन् । वास्तवमा केएल राहुल र अहान शेट्टीको विवाह तथा तानिया श्राफसँग आथिया शेट्टीको विवाहको खबर सार्वजनिक भएपछि उनी रिसाएका छन् । आफ्ना छोरा छोरीले प्रेमी प्रेमीका रोजेको र उनीहरुको विवाहको समेत खबर सार्वजनिक भएको भन्दै उनी रिसाएका छन् ।
त्यसवारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सुनिल रिसाएका हुन् । शुक्रबार राति, सुनीलले यी समाचारलाई अफवाहको रूपमा व्याख्या गर्दै एक पोस्ट साझा गरे, जसमा अभिनेताले यस्तो पत्रकारिता दा ग हो भनेर लेखेका थिए।
सुनील शेट्टीले ट्वीटरमा मिडियाको समाचार सेयर गर्दै लेखेका छन् कि मैले यो लेख हेरे र अब म अन्योलमा छु कि यो पढेर चकित हुने कि रिसाउने ? मैले बुझ्नै सकेको छैन कि यस्ता समाचार छाप्नुअघि किन यि कुराहरुको पुष्टि गरिदैन ? बास्तविक सत्य के हो भनेर किन सोधिएको छैन ? यस्तो लापरवाह पत्रकारिता दा ग हो । तपाईंले यो भन्दा राम्रो गर्न सक्ने केहि चीजहरू छन्।
सुनिल शेट्टी द्वारा पोस्ट
अहान शेट्टीका प्रवक्ताले पिंकभिल्लालाई दिएको जानकारीमा यी रिपोर्टहरूलाई अफवाह पनि भनिएको थियो। आहानले आफ्नो स म्ब न्ध लाई लिएर सधैं खुलेर कुरा गर्दै आएका छन् । तानिया श्राफसँग उनको प्रेम चर्चित छ । पछिल्लो १० वर्षदेखि दुवै सँगै छन् । मार्च २०२१ मा, तानिया श्राफले आहान शेट्टीलाई सबै कुरा बताइन्, जससँग उनी जे पनि गर्न चाहन्छिन्।
Previous खुसीको खबर : नयाँ भेरियन्ट नआए ३ महिनापछि को’रोना महामारी अन्त्य हुने वैज्ञानिकको दा’वी
Next भोलि माघ ९ गते आईतबार,शुभ -अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !